Mob Caps, fanafody fanariana ara-pahasalamana, fanary tsy misy tenona - JPS
fonon-tànana fanadinana nitrile
fonon-tànana fanadinana latina
akanjo vita amin'ny marary
Fitaovana fitsaboana fototra
horonana taratasy fandriana
mahakivy ny lela
paosin'ny famehezana tena
Kitapo BD tes
Coverropropropique microporous miaraka amin'ny fantsom-paty
Akanjo fanary-3 ply tsy tenona fandidiana fa ...
Saron-tava sivily tsy misy tenona miisa 3 miaraka amina tadivavarana
Fonon-tanana fanadinana latsa
Tsy misy vovoka vita amin'ny fonon-tanana Nitrile
Maimaim-poana volo vita amin'ny fonon-tànana vita amin'ny visy manga
Fitaovana fikosehana fanary
Akanjo fandidiana SMS mahazatra
Drapes maloto tsy misy fangarony raha tsy misy fantsom-pitaovana
Fandidiana fandidiana sterilety azo alefa
Kitapo Cesarean azo ampiasaina
Manome vokatra miaro hatrany an-doha ka hatrany amin'ny tongotra isika
Matihanina sy mifantoka
Miaraka amin'ny traikefa 20+ taona hanondranana fanafody ara-pitsaboana
Matoky sy milamina
Mifantoha amin'ny serivisy alohan'ny varotra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana
Ampiasao isan'andro ny kofehin-kazo vita amin'ny hazo, fanodinana sy fanamorana volo
Endri-javatra Aza hadino fa tsy tafiditra ao ireo kojakoja hafa. Kalitao vaovao 100% mponina vaovao azo ampiasaina: ankapobeny vokatra ara-nofo: landihazo fampidirana vokatra: vita amin'ny valala voajanahary, firafitra malefaka, fitsaboana ny hafanana avo, madio sy madio ara-pahasalamana. - Ambony voafantina ...
Anti-leakage akanjo fandidiana azo alain-tahaka malefaka mahatsapa fahaizan'ny Adsorption matanjaka
Famaritana malefaka, be rivotra, manana fahaiza-manao adsorption matanjaka (anti-leakage), manavaka ny vovoka sy bakteria, misoroka ny fikororohana sy ny volo hianjera. Manokana rano toy ny alikaola, ra, menaka, rano. Malemy, malefaka ary ahazoana aina be mpampiasa amin'ny fitsaboana, fikarakarana sakafo ...
JPS Team building in Hangzhou
Shanghai JPS Medical Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2010, dia mpanamboatra matihanina sy mpamatsy vahaolana sy vokatra fiarovana, famonoana otrikaretina ary fanamorana.
Ny taratasy fanamarinana ISO13485 sy CE misy fanjifana fanafody mihoatra ny 60 navoakan'ny TUV any Alemana.
Manana ekipa R & D za-draharaha manan-karena izahay, ekipa QC ary ekipa serivisy.
Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 80, ao anatin'izany ny tsena anatiny.
1. Mahery amin'ny R & D: afaka mamokatra sy mamatsy vokatra namboarina izahay mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
2. Kalitao azo ianteherana: manaraka ny fepetra takiana amin'ny ISO13485 izahay. Ny ekipanay QC dia manana traikefa efa ho 20 taona tamin'ny famokarana sy famatsiana fiarovana, famonoana otrikaretina, vahaolana ary vokatra sterilization.
3. Vidiny mety: noho ny habetsahanay, ny fifaninanay dia mifaninana lalandava.
4. Fandefasana haingana: mitazona vokatra mahazatra mahazatra foana izahay mba hanafohezana ny fotoana fandefasana.
5. Ny mari-pahaizana ISO13485 sy CE misy fanjifana fanafody mihoatra ny 60 navoakan'ny TUV any Alemana, izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny ankamaroan'ny fitakiana tolo-bidin'ny governemanta.